Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment खाना खाने बित्तिकै नुहाउनु कतिको ठिक छ ? - Pnpkhabar.com
खाना खाने बित्तिकै नुहाउनु कतिको ठिक छ ?
एजेन्सी : हामीहरु मध्ये कतिको बानी छ, खाना खाने बित्तिकै नुहाउने के खाना खाने बित्तिकै नुहाउनु स्वास्थका लागि राम्रो हो त ? खाना खानेबित्तिकै नुहाउँदा तपाईंको शरिरको तापक्रम घट्ने गर्छ त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि शरिरका अन्य अंग जस्तै हात, खुट्टा, अनुहार आदिको रक्तप्रवाह बढ्ने गर्छ । यसो हुँदा शरिरको क्रियाकलाप सही ढङ्गले भइरहेको हुँदैन ।
शरिरमा जब हामी पानी हाल्छौं तब रगतको प्रवाह छालासम्म पुग्छ र शरिरमा गर्मी पैदा हुन्छ । यदि हामीले खाना खानेबित्तिकै नुहायौं भने खाना पचाउन मद्दत गर्ने पेट वरिपरिको रक्तसंचार प्रभावित हुन्छ जुन शरिरका अन्य भागमा नै तेज हुने गर्छ ।
यसो हुँदा खाना सही तरिकाले पच्दैन वा पच्न समय लाग्छ । खाना पचाउनका लागि शरिरलाई उच्च रक्त प्रवाहको आवश्यकता पर्छ । यदि खाना खाएपछि तातो पानीले नुहाउनु हुन्छ भने शरिरलाई चिसो बनाउने क्रममा रक्तनली फैलिएर रगतको तातोलाई छालासम्म पुर्याउने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो दिमागले चाहिने जति रगत पाउँदैन । यसको प्रतिक्रियामा हामीलाई रिंगटा लाग्नेजस्ता समस्या देखिन थाल्छ । यद्यपी, यो समस्या सबैमा देखिँदैन ।
यदि तपाईं बिरामी भइरहनुहुन्छ वा रक्तसंचारसम्बन्धि कुनै समस्याको सामना गरिरहनु भएको छ भने खाना खानेबित्तिकै नुहाउँदा रिंगटा लाग्न सक्छ । त्यसकारण खाना खाएको एक वा आधा घण्टासम्म ननुहाउनुहोस् । त्यसैले खाना खानेबित्तिकै भारी काम वा कुनै व्यायाम नगर्न पनि सल्लाह दिइन्छ । यद्यपी, यी सबै तथ्य चिकित्सकीय हिसाबले पूर्ण रुपमा प्रमाणित छैन ।